Home Wararka Ilhan Cumar oo ka hortimid cunaqabateyntii Mareykanka saaray Soomaaliya 2010 & 2012
Ilhan Cumar oo ka hortimid cunaqabateyntii Mareykanka saaray Soomaaliya 2010 & 2012
Xildhibaan Ilhan Omar oo katirsan aqalka Koongareeska Maraykanka ayaa warqad u qortay Maamulka madaxweyne Joe Biden, taasoo ku baaqaysa in dib u eegis lagu sameeyo cunaqabateyn la saaray Soomaaliya 2010 iyo 2012, taasoo weli taagan.
Tan iyo markii la saaray cunaqabateyntan, xaaladda Soomaaliya ayaa si weyn isu beddeshay. Ilhan Cumar ayaa warqadda ku weydiinaysa maamulka Biden sida siyaasadda cunaqabateynta ay u ciyaareyso istiraatiijiyadda ballaaran ee Soomaaliya.
April 13, 2010 Madaxweynihii hore ee Maraykanka, Barack Obama ayaa soo saaray amar fulineed oo cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogaya dadka ka qayb qaadanaya xaaladda sii xumaanaysa ee Soomaaliya, oo ay ku jiraan falalka budhcad-badeedda ee xeebaha Soomaaliya.
Maraykanka ayaa oggolaaday adeegsiga xeerka Awoodaha Dhaqaale ee Degdegga ah ee Caalamiga ah (IEEPA) iyada oo laga jawaabayo khatarta amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda.
Cunaqabateynta ayaa isla markiiba dhaqan gashay.
Previous articleQoor Qoor oo maanta soo xulaya labo xildhibaan oo tirsigoodu yahay HOP#025 & HOP#081
Next articleAl Shabaab oo weeraray ciidanka ku sugnaa bar-koontarool – degmada Cadale
Kooxo hubaysan oo Askari ka tirsan Ciidanka Booliska Soomalia ku dilay...
Banaanbixii berri oo dib loo dhigay